Evernote inowana kumhanya neshanduro yayo nyowani | IPhone nhau
Alvaro Fuentes | | IPhone maapplication, dzakawanda
Mukutsvaga kwayo kuita kuti munhu wega wega arongeke uye abudirire, iyo inozivikanwa noti-inotora app Evernote yakaregeredza mashoma akakosha zvinhu. Iko kumhanyisa kwekushandisa, kana kuti zvirinani kushomeka kwayo, chinhu chinojairika mumaonero evashandisi. Evernote achangoburitsa chirongwa chakagadzirwazve cheIOS icho chine chinangwa chekugadzirisa zvichemo izvi, pamwe nekuita kuti zvinyorwa zvako zvive nyore kuongorora.
Chinhu chekutanga chauchacherekedza iwe paunotanga kushandisa Evernote vhezheni 8.0 ndiyo nyowani nyowani skrini inoratidza zvawanga uchiita pamberi chaipo chaipo pawakasiya, nezvako zvinyowani manotsi zvakagadzirira. Cherechedzo yekutarisa inoita kuti iwe uone kuti ndeapi manotsi ane huwandu hwakawanda hwezvinyorwa uye izvo zvine zvinyorwa chete. Pamusoro peizvi, iyo nyowani yekufambisa bar yakasungirirwa pazasi pechishandiso zvakare inozivikanwa, kuburikidza iyo iwe yaunogona kusvetuka kubva kune imwe tsamba kuenda kune imwe, tsvaga, tarisa mapfupi, kana kutarisa account yako. Imwezve green icon iri pakati peiyo nyowani menyu bar inokutendera iwe kuti utange nekukurumidza nyowani nyowani uye pikicha refu pane iyo icon inokutendera iwe kutsvaira kumusoro kuti utore odhiyo katsamba, pikicha, kana kuwedzera chiyeuchidzo.
Chinhu chitsva chevashandisi veEvernote Bhizinesi vanokutendera kuti uparadzanise zvinyorwa zvako kubva kumanotsi ebhizinesi rako. Ichi ndicho chinhu "chinodzikamisa zvinoshamisa aya mamiriro ebhizinesi zvakanyanya zvekuti zvinoita kuti zvive nyore kuwana," akadaro Nate Fortin, mutevedzeri wemutungamiri wedhisheni kuEvernote. Uye zvakare, akataura kuti: "Tinoda kuti vanhu vashandise nguva shoma kuongorora uye nenguva yakawanda vachiita zvinhu." Ingo pfuurira kwenguva refu paaccount icon kuti uchinje pakati pebhizinesi account yako neakaundi account yako.
Zviunganidzwa zvako zvino zvichagara pamusoro pechiratidziro cheapp uye unokwanisa kuzvisefa nematagi ayo anoshandiswa kuziva zvinyorwa zvako. Evernote yekutsvaga kwekutsvaga kwakasimba kwave kukurumidza uye kusimba mukuburitsa uku, Fortin akadaro.
Uye ndiko kuvandudzwa kwakaitwa kuseri kwezviitiko zveEvernote izvo zvinogona kuve nebasa kupfuura dhizaini (kunova kusimudzira kukuru pamusoro pemaonero eEvernote). Evernote Executive Mugadziri Eric Wrobel akati iyo yose app yakanyorwa patsva kubva kumashure-kumagumo, uye yakaunza zvinoshamisa zvinoshamisa kukurumidza mubhodhi, kusanganisira nekukurumidza syncing. Mukuenzanisa pakati pazvino vhezheni 7.0 uye nyowani 8.0, mutsauko wekumhanya pakati peimwe neumwe unowoneka.
Makwikwi emamaki ako
Evernote yaimbove yega sarudzo yekutora manotsi pane zvese kubva kugadzirisa zvakapusa mabasa kune akaomesesa mapurojekiti, asi ikozvino iyo yakakurumbira app ine yakakomba makwikwi. Microsoft's OneNote neGoogle Keep sarudzo dzakakurumbira nekubatanidzwa nemamwe masevhisi kubva kumakambani akafanana. Apple yemuno inoteedzera-kutora app yave zvakare kubatsira zvakanyanya nezvitsva maficha, uye akareruka maapplication uye zvirongwa zvakaita saSimplenote zvaita kuti kunyora-kutora kuve nyore kupfuura Evernote yakawedzera dura pane yakaturikidzana yezvinhu. Mutengo zvakare chinhu, kunyange Evernote inopa yakaganhurirwa yemahara vhezheni.
Mukurumbira waEvernote wakatora chinhanho mwedzi wapfuura mushure mekugadzira misoro yechinjo kumutemo wayo wepachivande wakaita kuti zviite kunge kuti programmes dzekambani dzinogona kuwana manotsi ayo pese pavanenge vachida. Nhau dzakatyisidzira vashandisi, kunyangwe Evernote akakurumidza kujekesa kuti mainjiniya avo vaiwana zvinyorwa chete kungosimudzira mashandisiro emuchina wekudzidzira kugona uye vasina ruzivo rwezviri mukati memanotsi.
Ehe pane zvakawanda zvingasarudzwa kana zvasvika pakutora-kutora kunyorera, asi izvo zviri pachena ndezvekuti ikozvino, pamwe nekuvandudzwa kweEvernote, makwikwi anowedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Evernote inowana kumhanya neshanduro yayo nyowani
Hongu, asi ivo vachiri kugumira huwandu hwezvigadzirwa kusvika zviviri.
Uye ivo havapi chero chinhu chitsva chakaringana kufunga kuenda kuburikidza nebhokisi.
Pindura kuna John_Doe